बन्दाबन्दीभित्रको वर्षा - Jhilko
विश्वव्यापी महामारीले सताइरहेको यो समयमा वर्षाले समेत अत्याधिक सताएको छ । यसलाई हाम्रो गाउँघरको भाषामा “लुतोमाथि पिलो थप” भन्ने गर्छन् । पहिले हरेकका शरीरमा लुतो देख्न पाइन्थ्यो । यसले शरीका अन्य भागमा भन्दा हात र जाँघमा बढी सताउने गर्दथ्यो । लुतो लाग्यो भने अरु काम गर्ने फुर्सदै हुँदैन । किनकि भएभरको समय यसैलाई कन्याउन लागउनु पर्ने । लुतो भएकोलाई पिलो उठ्यो भने कस्तो होला ? लुतोमाथि पिलो थप भनेको एउटाबाट सास्ती पाएर पार नपाउँदै अर्कोबाट सताइनुलाई भनेको होला । लुतो र पिलो एकै पटक भयो भने त्यसलाई कसैले भाग्यले ठगेको भन्ने गर्छन् । भाग्यमा विश्वास गर्नेहरुलाई त्यो भन्दा पर अर्को कुरा सोच्ने क्षमता समेत हुँदैन ।
यसपटक एक,दुुई मुुलुकलाई मात्र नभएर विश्वभर लुतोमाथि पिलो थप भएको छ । अहिलेसम्म पिलो नभोगेकाहरुले पनि केही समयभित्रै त्यो भोग्ने अवस्थामा पुुग्नेछन । किनकि विश्वका हरेक मुुलकमा यतिवेला बन्दाबन्दीको अवस्था छ । कसै कसैले केही खुकुलो पार्ने कुरा गरेका छन् । त्यो तत्काल धेरै सम्भव देखिदैंन । बन्दाबन्दीले उत्पादनमा ह्रास आउने छ अनि आर्थिक अभाव हुने छ । एकातर्फ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनु अर्कोतर्फ उत्पादन घट्नु जसका कारणबाट आवश्यक उपभोग्य बस्तुको अभाव हुनु । यसले अहिले दिएको बन्दावन्दीको कष्टभन्दा आर्थिक अभावले कम कष्ट दिने छैन । अहिले सबै राज्यको ध्यान कोरोना रोकथाममा रहेको छ । उत्पादनमा ध्यान दिएर पनि के गर्ने ? यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक त छ तर तत्काल खासै उपाय छैन । चतुुर राज्य सञ्चालकको ध्यान चारैतिर पुुगेको हुन्छ र पुुग्नु पनि पर्छ । अति संक्रमित मुलुकहरुमा यो समयमा ज्यान जोगाउन गाह्रो छ भने कतिवेला विभिन्न कृषिवाली उत्पादन गर्ने ? भएभरका उद्योगहरु समेत बन्दछन् । खाद्य उत्पादनका साथै उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादनमा ह्रास आएको हुनाले अत्यावश्यक बस्तुमा महंगी बढ्न सक्छ । उत्पादन नहुुनु र कम उत्पादन हुनुुका कारणले अभाव हुनुु पनि लुुतोमाथि पिलो थपिए जस्तै हो ।
चाहे कृषिको कुरा होस चाहे उद्योगको कुरा होस सबैलाई सबैतिर प्रभाव पारेको अवस्था छ । कुुन समयबाट हामी उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौं भन्ने समेत कुनै निश्चय छैन । २०१९को डिसेम्वरदेखि चीनबाट देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९,२०२०मे ८ तारेखसम्म विश्वका २२३ मुलुकमा फैलिइ सकेको छ । केही मुुलुकमा यसको प्रकोप केही कम हुँदै गए पनि धेरै मुलुकमा यसको प्रकोप कम हुन सकेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्व एक भएको छ । तर यसको संक्रमण घटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । विश्वका नामी राष्ट्रहरुले समेत यसबाट हुने क्षति घटाउन सकेका छैनन् ।
आरम्भका दिनहरुमा नेपालमा यसको प्रभाव खासै देखिएन । हामी स्वस्थ छौं र सुरक्षित छौं भन्ने लागेको थियो । कोरोनाकाट हामी संक्रमित हुँदैनौ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । सरासर हेर्दा हाम्रो मुलुक खासै संक्रमणमा पर्दैन भन्ने थियो । कोरोनाको प्रकोप नहुुनुुमा नेपालमा विभिन्न किसिमका जडीवुटी भएको हुनाले, हावापानी स्वस्थ भएको हुनाले र नेपालीले सरसफाइमा निकै ध्यान दिने गरेको हुनाले समेत नेपालमा यसको प्रभाव देखा पर्न सकेन भन्ने कुरा धेरेबाट सुन्नमा आयो । अन्य मुुलुकको संक्रमित र क्षति भएको संख्या हेर्दा हामी कोरोनाबाट मुक्त थियौं तर जति दिनहरु वित्दै गए हामी उति उति संक्रमणमा त्रसित हुँदै जान लाग्यौं । विस्तारै संख्या थपिदै जान लागे । कोरोनाको संक्रमति संख्या यसरी बढ्दै आइरहेको छ कि एकै टोलमा दर्जन बढी संक्रमित भएका समाचार आउने लागे । हामी दिनहरु विताउन गाह्रो भएर एकान्तवासमा रहेको अवस्थामा बाह्य क्रियाकलाप गर्न सकेका छैनौ । त्यसमा थप छिमेकमा यसको प्रभाव आयो रे भन्ने सुन्दा सामान्य मन हुनेहरुलाई कस्तो भएको होला ? यो पनि लुतोमाथि पिलो थप जस्तै हो ।
हामीले चाहेर पनि तत्काल यसबाट पार पाउने अवस्थामा देखिदैन । तर यतिवेला मन दह्रो चाहिएको छ । यी पंक्तिहरु तयार पार्दासम्म नेपालमा १०९ जना संक्रमित संख्या छ भने २२जना उपचार पछि फिर्ता भएका छन् । त्यसमध्येमा पुनः तीन जना संक्रमित भएर अस्पताल पुुगेको खवर छ । उपचारपछि घर फर्केकाहरु पुुनः अस्पताल पुुगे भन्ने खवर सुन्दा यो पनि लुतोमाथिको पिलो थप जस्तो लाग्यो । एक पटक कोरोनाले संक्रमित भएकाहरु उपचारपछि स्वस्थ भए भन्ने सुन्दा मनमा कति हर्ष लागेको थियो । अव बाँकीहरु पनि छिट्टै घर फर्कने छन् भन्ने लागेको थियो तर पुुनः उनीहरु नै अस्पताल पुुगे भन्ने सुन्दा झन त्रसित हुने अवस्था आयो । न त यति दिनभित्र यसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुनै निश्चय छ न यसको उपचार विधि नै छ । यस्तो अवस्थामा कारोेनाबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो विधि भनेको एकान्तवास रहेछ । एकातर्फ भाइरस नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनुु अर्को तर्फ एकान्तवासको पालन गर्न गाह्रो हुने छिमेकी देख्दा यो पनि हाम्रो लागि लुुतोमाथिको पिलो जस्तै लाग्छ । एकान्तवासको पालना नगर्नाले हुने नोक्सानको वारेमा सुनेर पनि आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरु वास्तवमा परिवार, समाज र देशकै पिलो हुन । उनीहरु जतिसुकै नजिकका नातेदार भए पनि उनीहरु कसैका पनि मित्र हुन सक्दैनन् । हरेक जना उनीहरुबाट सचेत हुन आवश्यक छ ।
यो समयमा एकातर्फ कोरोनाका कारणले लकडाउनमा बस्नु परेको छ । यसका कारण उत्पादनका कुनै पनि कार्य हुन सकेका छैनन् । यसले भोलिको दिनमा हुने अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरुबाट कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइ रहेको छ । अहिले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढी भएको अन्य कुनै कारण छैन । एकान्तवासमा बस्न नसक्नेहरुबाट यो एकजनाबाट अर्कोमा सर्दै आएर १०९ जना संक्रमितहरु देखिएका छन् । परोक्ष रुपमा यो भन्दा धेरै संख्या हुन सक्दछ । यो वर्ष वर्षाले भएको नोक्सान कम छैन । हावाहुरी, असिना र चट्याङले धनजनको क्षति भएको छ । यसले पु¥याएको क्ष्तिको मात्रा अत्याधिक रहेको छ । कोरानाबाट बच्न एकान्तवास अपनाएका छौं तर वर्षाबाट हुने क्षतिबाट बच्न अहिलेसम्म उपाय खासै छैन । हाम्रा लागि वेमौसमको वर्षा लुतोमाथिको पिलो बनेको छ । यो वर्षा र कोरोना हाम्रा लागि उस्तै उस्तै जस्तै भएका छन् । घोराही १५,दाङ, २७ वैशाख २०७७
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५९ हजार ५०० नाघ्यो
लिपुलेक सीमा अतिक्रमण
'प्रधानमन्त्रीले दलको नाडी छाम्नमात्र अध्यादेश ल्याएका...
अध्यादेश फिर्ता भयो भने पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता फिर्ता हुन्छ र ?
लोक सेवाले खुलायो साढे सात सयको अधिकृतको विज्ञापन
बुधबार सूचना जारी गर्दै आयोगले अप्राविधिकतर्फ विभिन्न समूहमा अधिकृतका लागि दरखास्त...
बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा भ्रमण वर्ष घोषणाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री...